Munaasabadda ciidanka booliiska - BBC Somali
Munaasabadda ciidanka booliiska
20 Disembar 2010
Image caption Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed oo ka qeybgalaya munaasabadda ciidanka booliiska
Xaflad maanta lagu qabtay dugsiga sare ee booliska ayaa waxa ka qeybgalay madaxweynaha Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed wasiiro iyo saraakiil ciidan.
Taliyaha booliska Dowladda KMG General Cali Xasan Looyaan oo ka warbxinayay taariiqdii booliska ayaa xusay in ciidan boolis ah ka badan 3kun oo askari oo ay ku jiraan in sanadkan ay tababaro ku soo qaateen dalalka deriska iyo dugsiyo tababar oo ku yaalla gudaha dalka.
Taliyaha booliska ayaa sheegay in boolisku ay ka howlgalaan gobolo ka baxsan caasimadda oo si toos ah iyo si dadbanba ay howshooda ku hirgaliyaan.
Madaxweynaha Soomaaliya shariif Shiikh Axmed oo khudabad dheer u jeediyay ka soo qeybgalayaashii xafladda ayaa sheegay in ahmiyad weyn ay siinayaan dhismaha booliska waxana uu ku booriyay booliska in sare u qaadaan aqoonta iyo anshaxa ciidanka si ay ugu guuleystaan waajibaadkooda.
Madaxweyne Shariif ayaa ugu baaqay in ciidanka ay joojiyaan isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya isaga oo si gaar ah farta ugu fiiqay qaadka.
Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdishakuur Shiikh Xasan Faarax oo isaguna hadal kooban ka jeediyay munaasabada ayaa ammaanay kaalinta booliska isaga oo sheegay in boolisku yahay horseedaha nabadda hadii aan boolis jirinna ay ka dhigan tahay in aanu nidaam iyo kala danbeyn jirin.
Waxa uu ugu baaqay booliska in ay dardargaliyaan howlaha horyaalla oo ay aminga gudaha ee dalka si wanaagsan wax ugu qabtaan.